Sida loo noqon maamulaha mashruuca IT ah | Career khayraadka ka USAHello | USAHello
Sida loo noqon maamulaha mashruuca IT ah
IT u taagan tahay tiknoolajiyadda macluumaadka. xirfadiisa A IT ee ka dhigan tahay shaqo la kombiyuutarada iyo macluumaadka ay ku kaydiso iyo isticmaalka shaqada. maamulaha mashruuca A qabanqaabisaa mashaariicda iyo hawlaha iyo dadka in ay u sameeyaan. Ogow sida inuu noqdo tababaraha Mashruuca IT ah.
Waa maxay maamulaha mashruuca IT ah?
maamulaha mashruuca IT An ganacsi-size dhexdhexaad ah uu kormeero nidaamka IT ah (kombiyuutarada iyo shabakadaha) in dhammaan waaxyada. Isaga ama iyada ayaa kormeeraya shaqaalaha casriga ah iyo qorshaynaysa nidaamka cusub ee shirkadda koraa. maamulaha mashruuca waa inuu xaqiijiyo nidaamka oo dhan waa la shaqeeya iyo ammaan.
Magacyada kale ee shaqada this yihiin Tababaraha nidaamyada computer iyo warbixin ama kaliya Tababaraha IT. shirkado badan oo ay raadinayaan tababare Mashruuca IT sida shirkadaha ay la beddelo iyo koraan.
Maxaad ka fili kartaa in shaqada tababare Mashruuca IT?
Waajibaadka Tababaraha Mashruuca IT ah
maamulaha mashruuca IT oo qariyey waqti badan dadka la tacaalida. Inta badan dadka waxa ay ku jiraan fulinta hawlaha iyo mashaariicda computer la xiriira. maamulaha mashruuca waa inuu xaqiijiyo shaqaalaha ay garanayaan waxay sameeyaan iyo in ay u samayn on time. maamulayaasha Mashruuca IT sidoo kale dadka la raba mashaariicda lagu sameeyey xiriiraan. Waxay sheegaan in ay shaqeeyaan oo ay u sii ilaa taariikhda.
Tababaraha mashruuc kasta oo furfuraya masalooyin marka ay yimaadaan ilaa. Sidaas Tababaraha ah mashruuca IT furfuraya masalooyin in hardware, software, ammaanka, ama network computer isaga ama iyada shirkadda ee.
Waajibaadka sidoo kale ka mid:
warbixino qoraal ah
Diraya emails iyo samaynta calls
Ka caawinta dhibaatooyinka dhalato kooxda IT
Abuuridda nidaam cusub
Ka hortagga dhibaatooyinka mustaqbalka
maamulayaasha Mashruuca IT shaqeeyaan-size dhexdhexaad ah ururada waaweyn iyo ganacsiyada. Inta badan maamulayaasha Mashruuca IT shaqeeyo xafiis kale ee shaqaalaha IT ah. Qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in shaqeeyaan fog isticmaalaya video iyo telefoonka xiriir. maamulayaasha Mashruuca intooda badan waa shaqaalaha, laakiin qaar kale waxay la banaan waxaa laga yaabaa in (kiraystay mashruuc gaar ah). maamulayaasha Project shaqeeyaan saacado dheer jeer mashquul.
MUSHAHARKA maamulayaasha Mashruuca IT
Mushaharka maamulayaasha mashruuca ku xiran waayo-aragnimo iyo aqoon. Waxaa dhaxeysa $60,000 in $200,000 sanad, tababarayaashii ugu dakhliga badan oo ku saabsan $140,000.
Waa maxay nooca qofka ka dhigaysa maamulaha mashruuca IT wanaagsan? Haddii aad jeclaan technology computer, xalinta dhibaatooyinka, iyo dadka wax ka qabashada, markaas maamulaha mashruuca IT waxaa laga yaabaa in mustaqbalkiisa ciyaareed wanaagsan idiin.
Good at taxliilinta macluumaadka
isgaarsiinta Great - maamulayaasha Mashruuca IT waa in si joogto ah ula xiriiraan xubnaha kooxda iyo ku siiyo tilmaamo cad
Good ee qorshaynta iyo ururka
Karaa si loo xaliyo khilaafaadka
Karaa in la sameeyo bandhigyo
In taxadar iyo si taxadir ah faahfaahinta
Up-to-date fahamka hardware, software, iyo arrimaha amniga
Waa maxay tababarka, shahaado iyo waayo-aragnimo ku samayn maamulaha mashruuca ITs u baahan?
Tababarka tababarayaasha Mashruuca IT
maamulaha mashruuca IT An u baahan doontaa shahaado. degrees computer aasaasiga ah waa technology macluumaadka, sayniska kombiyuutarka, iyo injineernimada computer.
degree A nidaamka macluumaadka maareynta (MAXAY) dari doona maamulka iyo technology computer. Tixgeli degree MIS haddii aad rabto in aad Tababaraha mashruuca IT ah. Waxaa si fiican aad u tababari doonaan shaqada.
Waxaad ka baran kartaa mid ka mid ah degrees, kuwaas oo aad Kulliyadaha bulshada ama jaamacad. Haddii aad shaqeyso inta lagu jiro maalinta, waxa kale oo aad ka baran kartaa online for darajo, kuwaas oo. Raadi college beesha kuu dhow iyo dheeraad ah oo ku saabsan baran helitaanka shahaadada MIS online.
Waxaad u baahan tahay shahaado, laakiin sidoo kale aad aad shahaado kartaa in meelo gaar ah oo shaqo ah:
Mashruuca A Management Professional (PMP) shahaadada muujinaysaa aad u ogaato sida loo maareeyo mashaariicda.
AWC iyo CISSP shahaadooyinka muujiyaan aqoon aad in ay la tacaalaan arrimaha amniga internetka sare.
shahaadooyinka dhiifoon iyo xoo muujiyaan in aad u ogaato qaabka in horumarinta badan software isticmaali. shahaadooyinka waxaa loogu talagalay dadka hore u xirfadlayaasha IT.
Dhamaan caddeyn kuwan waxaa loogu talagalay dadka hore u xirfadlayaasha. Ma run ahaantii aad u baahan tahay shahaadada kuwan? Haddii aad ka shaqayso meelo gaar ah, sida caafimaadka iyo dawladda, waxa laga yaabaa inay faa'iido leh. Read more IT iyo caddeyn maamulka mashruuca ku saabsan iyo heli tirakoobka iyo faahfaahinta ku saabsan shaqada ee maamulaha mashruuca IT.
Waxaad u baahan doontaa waayo-aragnimo IT ama maamulka ka hor inta aadan noqdo tababaraha mashruuca IT ah. laga yaabaa in aad shaqo kale IT iyo shaqo ka keeni xirfadaha kombiyuutarka aad. Ama laga yaabaa in aad maamula noocyada kale ee barnaamijyada, oo aad keeno xirfadaha maamulka aad IT si.